Tapahana - Delta Engineering Belzika
Alarobia 12 martsa 2014 by Delta Engineering
Karakarao kofehy mihodina ho an'ny lohany very (domes) boribory fohy
Io mpanamboatra dome io dia manapaka ny lohany very (= domes very) avy amin'ny tavoahangy. Amin'ny alàlan'ny famonoana dome very, azonao atao ny manisy tavoahangy misy menaka mavesatra ary miangona amin'ny fitaovana. Ho an'ny savony hatramin'ny halavany 80 mm.
Published in fanapahana
Spin trimmer ho an'ny loha boribory very (domes) - kinova lava
Ity trimmer mihodina ity dia nanapaka ny lohany very (= domes very) avy amin'ny tavoahangy. Amin'ny alàlan'ny famonoana dome very, azonao atao ny manisy tavoahangy misy menaka mavesatra ary miangona amin'ny fitaovana. Ho an'ny loha ambonin'ny 80 mm ny savaivony.
Masinina famafazana ho an'ny lohan'ny tsy boribory
Ity milina fanapahana ity dia mametaka boribory boribory lavalava, efajoro, mahitsizoro… vozona tavoahangy (loha very): endrika hafahafa, tsy boribory. Misy mombamomba samihafa.
Ity mpanapaka laser ity dia afaka manao fanafoanana laser ny boribory PET, PP, HDPE… tavoahangy. Afaka mivezivezy amin'ny rindrin'ny rindrina rehetra! Mandeha hatramin'ny 8000 BPH isaky ny loha laser. Fitrandrahana setroka.
Alakamisy 11 Febroary 2021 by Sara
Karakarao dome rotary haingam-pandeha haingam-pandeha
Tapa-dite rotary rotary haingam-pandeha ho an'ny tavoahangy misy dome boribory very. Afaka manapaka lohany amin'ny savaivony hatreo amin'ny 80 mm. Ny vatan-tavoahangy dia mety ho endrika rehetra: boribory, boribory, toradroa,… Hafainganana: hatramin'ny 30.000 BPH.